AC Contactors, Thermal Relays, Magnetic Mutange - Jiebang
Achitaurazve Capacitive Contactor
Thermal zadzisa ataure
Air Kunonoka Head
Jiebang chigadzirwa zvinhu unhu
· Kwakachena mhangura coils: yakaderera kupisa chizvarwa, hwakareba basa, uye muedzo-mu voltage riri pakati 85% uye 110%.
· Silver chiwanikwa contactsGoogle 4 anogadza esirivha chiwanikwa nevanhu kuti mukuru mutoro akatakura kugona uye mukuru magetsi conductivity.
· 32 zvimedu nesilicon esimbi chinoumba, ari kubvisa unotedza, kupisa nounzenza hwakasimba, uye muchina hakusi nyore kupisa kwenguva refu.
Mutual BATSIRWA UYE Anosvika pamwe.
Kubvira pakutanga kwayo
kambani yave achishingaira akasuma wokumwe michina yemhando yepamusoro, uye kuramba kuvandudza zvigadzirwa uye kuvandudza.
Nyorai uye chinhu ①Ma ...
JBA2 (LA2) Series Air Kunonoka Head
Nyorai uye chinhu ① A ...
Nyorai uye chinhu ① C ...
JBR2 (LR2-33) Thermal zadzisa ataure
Zhejiang Jiebang Electric Co., Ltd. iri muna Liushi Town, yemagetsi guru pakati China, ndiko muunganidzwa kutsvakurudza michina uye kukura, kugadzira, rokutengesa uye basa rimwe high- Michina vachida. The kambani iri specialized mune prodiuction pamusoro yepamusoro uye rakavimbika contactor, chafariz zadzisa ataure, rinobva Starter nezvimwe zvigadzirwa, pamwe nevapfumi kugadzirwa ruzivo uye simba nokutsigira chinzvimbo, kupa munhu azere zvakawanda kutsigira mabasa nezvezvipfuwo uye wokumwe michina kugadzirwa Enterprises uye kutapukirwa zvigoverwe indasitiri.
Marongerwo musimboti AC Contactor
A contactor ane nhatu zvinoriumba